Berk Hack Tool ကို-Facebook က / က iOS / Android ရဲ့နဂါးထ
Berk ၏နဂါးထ တစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် Facebook က ,iOS နှင့် Android devices.If သင်ရှာဖွေနေ hack က ဒီဂိမ်းငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကောင်းသတင်းရှိသည်. Morehacks.net သင့်အဘို့အကိုဖန်တီးအသင်း Berk Hack Tool ကို၏နဂါးထ.
Berk Hack Tool ကို၏နဂါးထ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်များအတွက်အသုံးပြုရကြ use.Can ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် Facebook က , iOS နှင့် Android.သင်ပြုလိုသမျှကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည် Berk Hack Tool ကို၏နဂါးထ button ကိုအောက်တွင်မှ run.Then Selec သင့် OS နဲ့ iOS ကိုသင်သို့မဟုတ် for Android ကိုကိုအသုံးပြုသည် usb ကြိုးကနေတစ်ဆင့် PC မှသင့်ရဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်. သင် facebook အတွက်သုံးမည်ဆိုလျှင်ဂိမ်းကို run detect ကိုနှိပ်ပါ. သင်ဖုန်းကို click နှိပ်ပြီး button.Now အလိုရှိငွေပမာဏရိုက်ထည့် detect connect လုပ်ပြီးတဲ့နောက် Runes , Wood နဲ့ငါး သင်လိုအပ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများကို Hacking button.To ဖြစ် click နှိပ်ပါ 100% သိရှိနိုင် Antiban ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်သင်ဂိမ်းနှိပ်လိုက်ကြော်ငြာများကိုမလိုချင်ကြဘူးဆိုရင် NO-ADS . သင်ပြီးစီးခဲ့ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်မိမိရဲ့ဖုန်းနဲ့ reboot.Then ဂိမ်းနှင့် enjoy.The hack ကအလိုအလျှောက်အခါတိုင်းလိုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ကမွမ်းမံဖွင့်လှစ်. အဆိုပါ Jailbreak ပြုလုပ်သို့မဟုတ် Root မလိုအပ် ဒီကို run ဖို့သင့်ရဲ့ device ပေါ် hack က tool ကို. သင်သည်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် Berk Hack Tool ကို၏နဂါးထ အောက်တွင် .
download Berk Tool.exe ၏နဂါးထ
သင့်ရဲ့ OS ကို select လုပ်ပါ
သင့်အဘို့အကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် USB cable ကိုကနေတဆင့်ကို PC နဲ့ဖုန်းကိုချိတ် iOS က သို့မဟုတ် Android မှာ
သင့်အဘို့အအသုံးပြုလျှင် Detect Facebook ပေါ်မှာဂိမ်းကို run ကိုနှိပ်ပါ facebook
button ကို Detect ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
Runes ပမာဏကိုရွေးပါ ,Wood နဲ့ငါး
Activate ကိုကလစ်နှိပ်ပါ hack
လိုက်တဲ့အခါအဆက်ပြတ် reboot လုပ်စက်ကိရိယာကိုပြီးစီးခဲ့သည်